Faafaahin Qarax Xalay ka dhacay Buuhoodle (Sawirro) - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Faafaahin Qarax Xalay ka dhacay Buuhoodle (Sawirro)
Faafaahin Qarax Xalay ka dhacay Buuhoodle (Sawirro)
August 2, 2018 admin372
Faafaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxay Qarax xalay ka dhacay Magaalada Buuhoodle ee gobolka Togdheer, Wiil dhalinyaro ah oo isku soo xiray Suun walxaha Qaraxa aaya beegsaday gaari NOAH ah oo ay wateen dad masuuliyiin ah.
Ilaa 3 qof oo ay ka mid yihiin Wasiirki hore ee arrimaha gudaha maamulka khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal iyo Cabdifataax Maxamed Cali oo la taliye u soo noqday Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen qaraxan.
Wasiirki hore ee arrimaha gudaha maamulka khaatumo Axmed Maxamuud Doolaal
Cabdifataax Maxamed Cali ayaa horey usoo noqday Madaxii Maaliyadda ururkii Xisbul islaam, waxa uuna 2013kii isaga iyo Xasan Daahir Aweys ka soo baxsadeen Alshabaab, Waa Qarixii ugu horeeyey ee ka dhacay Magaalada Buuhoodle.
Qaraxa ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn Masjidka Jaamaca ee Buuhoodle. Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah meel aad u mashquul badan ayaa waxaa lagu arkay Qeybta sare ee ninka Qaraxa fuliyey, oo u muuqday nin dhalinyaro ah.
Buuhoodle waxaa sheegta in ay maamulaan Khaatuma, Puntland iyo Somaliland, iyada oo ilaa hadda aanay jirin cid si sax ah gacanta ugu heysa. Sidoo kale Magaaladan ayaa ku taala xad beenaadka itoobiya.
Tagged blast buhodle Qarax buuhoodle
ANIGA IYO SIYAASIGA BEESHAYDA. W/Q: Shafici Roraye
Kenya oo burburisay xaruntii Hormuud Tuulada Caws Qurun
Deg Deg Qarax xoogan oo lagu dhuftay Saldhigga Degmada Waabari ee Magaalada Muqdisho
June 22, 2017 June 22, 2017 Cali Yare
Digreeto lagu kala diray rugta ganacsiga gobolka banaadir kadib tuhunkii ahaa in al-shabaab ay xiriir dhaw la leeyihiin
Booliska jowhar oo gacanta kusoo dhigay aabe wiilkiisa gowracay
January 26, 2020 Duceysane 0